Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la ilaalinayo siyaasadaha ilaalinta qaran ee tamarta iyo yareynta qiiqa iyo diiradda caalamiga ah ee ku saabsan dhaqaalaha kaarboonka yar, iyo sidoo kale hagaajinta tayada nolosha dadka, dadku waxay fiiro gaar ah u siiyeen tayada nolosha guriga. Nooc cusub oo bullaacad ah ...
Nidaamka bullaacadaha iyo biyaha, tuubooyinku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah, markaa tayada dhuumaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara. Laga soo bilaabo waayo-aragnimadii hore, marka la barbar dhigo tuubooyinka caagga ah ama biraha, tuubooyinka pe waxay leeyihiin astaamaha soo socda: density Cufnaanta hoose, xoogga sare, adkaanta wanaagsan ...
Maxay yihiin faa iidooyinka tuubbada jiingado-derbiga ah ee labanlaaban ah marka la barbar dhigo tuubooyinka dhaqameed
HDPE tuubbo jiingado ah oo laba-derbi ah ayaa asal ahaan ka soo jeeda Jarmalka. Waxaa si aad ah looga adeegsadaa Shiinaha sababo la xiriira dhibaatooyin badan oo ka dhacay adeegsiga tuubooyin dhaqameedka sibidhka ee dalka. Kadib dhibaatooyin badan oo ka dhacay adeegsiga shamiitada dhaqameed ee dalka ...